Sidina avy any Kazakhstan mankany Maldives amin'ny Air Astana izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Sidina avy any Kazakhstan mankany Maldives amin'ny Air Astana izao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Kazakhstan • Vaovao lafo vidy • Vaovao Mafana Maldives • Vaovao • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ny mpandeha rehetra, ao anatin'izany ireo efa vita vaksiny tanteraka, dia mitaky fanamarinana fanadinana PCR amin'ny teny anglisy hiditra amin'ny Repoblikan'i Maldives. Ho fanampin'izany, ny mpandeha dia mila mameno ny Fanambarana Fahasalamana momba ny Mpandeha 24 ora alohan'ny hiaingany.
Air Astana dia nanambara sidina mivantana avy any Almaty, Kazakhstan mankany Male any Maldives.
Kazakhstan mankany amin'ny sidina Maldives dia hitohy amin'ny 9 Oktobra 2021.
Ny zotra Air Astana Maldives dia hotompoina amin'ny fiaramanidina Airbus A321LR sy Boeing 767.
Air Astana dia hanohy sidina mivantana avy any Almaty mankany Male any Maldives amin'ny 9 Oktobra 2021.
Ny fiaramanidina Airbus A321LR sy Boeing 767 dia hiasa amin'ny lalana Almaty-Male inefatra isan-kerinandro amin'ny talata, alakamisy, sabotsy ary alahady.
Air Astana sidina efa niasa tany amin'ny Maldives manomboka ny 5 Desambra 2020 hatramin'ny 24 Mey 2021, alohan'ny fampiatoana noho ny fameperana ataon'ny governemanta.
Ny mpandeha rehetra, ao anatin'izany ireo efa vita vaksiny tanteraka, dia mitaky fanamarinana fanadinana PCR amin'ny teny anglisy hiditra amin'ny Repoblikan'i Maldives.
Ho fanampin'izany, ny mpandeha dia mila mameno ny Fanambarana Fahasalamana momba ny Mpandeha 24 ora alohan'ny hiaingany.
Hivoaka maimaimpoana ny visa rehefa tonga ao amin'ny seranam-piaramanidina lahy.
Rehefa tafaverina any Kazakhstan ny mpandeha rehetra dia tsy maintsy manana taratasy fanamarinana PCR ratsy, afa-tsy ireo izay vita vaksiny tanteraka.
Air Astana no mpitatitra saina any Kazakhstan, monina ao Almaty.
Air Astana dia miasa serivisy voalamina, anatiny sy iraisam-pirenena amin'ny zotra 64 avy amin'ny ivon-toerany lehibe, Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Almaty, ary avy amin'ny foibeny faharoa, Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Nursultan Nazarbayev.
Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Almaty, seranam-piaramanidina Almà-Ata taloha, seranam-piaramanidina iraisam-pirenena lehibe 15 km avaratra atsinanan'ny Almaty, tanàna lehibe indrindra ary renivohitra ara-barotra ao Kazakhstan.
Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Almaty no seranam-piaramanidina be olona indrindra ao Kazakhstan, mahatratra ny antsasaky ny fivezivezena amin'ny mpandeha sy ny 68% -n'ny fifamoivoizana.